Ilebhu yeGemic. Amatye anqabileyo endalo ziingcali zegemologists
UMBONISO WAMATYE NOKUTHENGA
Umboniso osisigxina weentlobo ezingaphezu kwama-250 zamatye anqabileyo aseCambodia nakwihlabathi liphela.
Iziko labucala elizimeleyo nelizimeleyo, elibonelela ngeenkonzo zovavanyo kunye nophando.
elebhu yelitye elinqabileyo
INTSHAYELELO KWI-GEM & GEMOLOGY
UKWAZISWA KWE-GEM-INKQUBO KUNYE NONYANGO-UKUXABISA NOKUFUNDA
UMyuziyam weGemstone kunye noRhwebo
Thenga iigments kwivenkile yethu
Iziko labucala nelizimeleyo labucala, elinikezela ngovavanyo lwejogoloji, iinkonzo zophando kunye nezatifikethi zamatye.
IKhambodiya ngumthombo wakho weesafire, iirubhu, iipayara kunye namatye amaninzi. Silungiselela ukhenketho ukusuka kwiintsuku ezi-2 ukuya kwezi-10 kubandakanya ukuhamba, indawo yokulala, ukutyelela emigodini kunye nabasiki begugu.
Nxibelelana nathi ukhenketho olungelelanisiweyo
Intshayelelo Gem & Gemology
Isingeniso samatye amakhulu anqabileyo afunyanwa kwindawo yentengiso. Esi siqalo, ukuqhubela phambili okanye inqanaba lobuchwephesha kugxininisa imiba ebalulekileyo yala matye.
Uwaqonda njani amatye anqabileyo endalo, izinto zokwenziwa, unyango? Uqikelela njani umgangatho kunye namaxabiso? Uya kufumana iimpendulo kuyo yonke imibuzo yakho ngelixesha leklasi.
Ezintsha : Ngenxa yemfuno enkulu evela kubafundi bethu abangakwaziyo ukuhamba ngexesha lobhubhane, ngoku kunokwenzeka ukuba bafunde kwi-Intanethi.
Iindaba zethu zamva nje, amanqaku malunga nelizwe eliyigugu.Uhambo lwethu kunye neziganeko.
Eyona emerald enkulu emhlabeni
Eyona emerald inkulu kwihlabathi Inkalamu, iNgonyama Emerald kodwa iBahia Emerald [...]
Ithemba iDayimane yi-45.52 carat yedayimane eluhlaza okwesibhakabhaka. Idayimani enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka eyakha yafunyanwa [...]
Enkosi kuNkosazana Angelina Jolie
Enkosi kuNkosazana Angelina Jolie ngolu tyelelo lungalindelekanga kwivenkile yethu namhlanje. Enkosi nge [...]
Uhambo lweMogok eMyanmar - Ihotele yaseMogok - iMogok Burma iruby uhambo lwaseMogok, iMyanmar Emva [...]
Uqeqesho lokuthengisa ubucwebe eSabara Angkor Resort & Spa
Uqeqesho lokuthengisa izinto zobucwebe eSabara Angkor Resort & Spa UNks Iet uqeqesha abo bamkela kunye [...]
Udliwanondlebe noLuc Yen ndaye ndadlan 'indlebe namhlanje noLuc Yen, nguZwelonke waseVietnam [...]
Udliwanondlebe olwenziwe ngumabonakude waseFrance ndadliwanondlebe ne-M6 French TV channel "ENQUETE EXCLUSIVE", malunga [...]
Ukuhanjiswa kweentsuku ezi-3 kwihlabathi liphela
Ukuhanjiswa kwe-Fedex Express kuhlala kuthabatha iintsuku ezi-3 ukuya kwezi-4 ukuhanjiswa, ukulandela umkhondo kwinqanaba ngalinye lendlela. Utyikityo luyafuneka xa kuziswa.
amatye amane axabisekileyo
Inkwenkwezi yeruby 4.28 ct $86.00
Inkwenkwezi yeruby 6.00 ct $120.00
Inkwenkwezi yeruby 3.02 ct $60.00
Inkwenkwezi yeruby 3.07 ct $61.00
I-sapphire yenkwenkwezi emnyama 1.10 ct $25.00
I-sapphire yenkwenkwezi emnyama 1.52 ct $35.00
I-sapphire i-Blue 2.11 ct $633.00
I-sapphire i-Blue 1.33 ct $173.00
Emerald 0.48 CT $96.00
Ikhonkco leDayimane yeGolide engu-14K $530.00
I-14K Isandatho seDayimane emhlophe yeGolide $500.00
Iidayimani 0.18 ct $117.00
Iidayimani 0.15 ct $98.00
… Ulwazi endilufundileyo luya kubaluleka kwixesha elizayo kwaye ndijonge phambili ekuthatheni enye iklasi eMelika ukuze zifunde ngakumbi. Ukuba uhlala ucwangcisa ukuthenga ubucwebe naphi na, kuya kufuneka uthathe eli klasi!
… Izacholo zilungile kwaye abasebenzi bebenobubele kwaye benobungcali. Ndishiye ivenkile ngendandatho entle ye-onyx eza kundikhumbuza ixesha endilichithe eKhambodiya :). Ukuba bendinexesha elininzi apha ndingathanda ukuzama ukusebenzela ukuba ndenze umsesane ngokwam!
Emz / Novemba 2019
… Kufanelekile ukuba undwendwele i-Gemological Institute, kwaye bonke abasebenzi banobungcali, banobubele, banomonde kwaye bayakuchazela ngento nganye onomdla kuyo. Ngokuqinisekileyo ndiza kubuyela e-Mina Reap ndize ndithenge into exabisekileyo apha kutyelelo lwam olulandelayo. Iinkwenkwezi ezi-5!
TinkaMauu / Novemba 2019
… Izacholo ziyafikeleleka kwaye zintle kwaye sonwabile kakhulu xa sithengile. Ngokubanzi ngamava amnandi endiwacebisa kakhulu… sonwabile kakhulu ngomgangatho weenkonzo, ezingasoloko ziqinisekisiwe kwi-Siem Reap.
Ukonwaba B / July 2019
… Umgangatho kunye nokubalula kwamatye awahlukeneyo esinokuwafumana evenkileni. Ekugqibeleni safumana isacholo somhombiso esenziwe ngetopazi emhlophe, esona sipho sihle kumlingane wam! Enkosi ngeGemological Institute!
Sayline / Ngamana 2019
… Ndinotyelelo olumnandi kakhulu kwaye ndifunde okuninzi malunga neendidi ezahlukeneyo zamatye anqabileyo.
Bendingazi malunga namatye kunye neegels ezahlukeneyo eCambodia. Izinto ezintle ongazenzayo ngaphandle kwetempile.
UBenji C / Ngamana 2019
… Sithathe isigqibo sokubuyela kuye sathenga ilitye. Ndimele ukuthi iDayini enyanisweni ibe luGugu kwivenkile. Ngaphandle kwakhe, sisenokungafuni nokufumana nto kuloo venkile. Ukuqukumbela, ivenkile inokuthenjwa kwaye yeyona venkile yakhe ifanelekileyo ndingayifumana kwiIndi Reap.
NguJan Tara / Agasti 2019
… Wakhawuleza wabuyisa imeyile yam kwaye sagqiba ekubeni siyile kunye nexabiso. Iringi ifike ngokukhawuleza kwaye ndothuswa yindlela eyenziwe kakuhle kwaye intle ngayo. Ndingayincoma ngokupheleleyo le nkonzo kwaye ndiza kuyenza kwakhona.
Iiholide23 / Agasti 2019
… Qiniseka ukuba undwendwela le ndawo ukuba ukhangela ubuncwane obusemthethweni. Yiyo kuphela ivenkile eqinisekisiweyo e-Siem Reap. Abasebenzi bahlala kakhulu kwaye baya kuyiphendula yonke imibuzo yakho.
I-Oly1610 / Agasti 2019